Zuva: Kukadzi 12, 2020
Veruzhinji Vashandi kuti vashandiswe mumahofisi ekushandira Ministry of Health mudunhu reprovince mukati mechikamu cheChinyorwa 657 chePrivity servants Law Nha. 4 (ndima B) uye Chinyorwa 663 / A cheChitairo Mutemo Nhamba 45. [More ...]
ETO Mutungamiri Metin Güler vakasimbisa kuti njanji uye makurukota anofanirwa kuitirwa muguta redu munaKubvumbi anozopa simba kumakwikwi eEskişehir nekusimudzira chikamu chechitima njanji mupasi rose. Chinyorwa cheEskişehir Chamber of Commerce [More ...]
Ankara Metropolitan Meya Mansur Yavaş akazivisa kuti varikushanda pane metro mutsva unodarika neMamak. Nepo mutsara mutsva uyo uchawedzera kumabvazuva kwedhorobha wakarongwa kuve mumatanhatu, uchitsvaga zviwanikwa zveprojekiti zvakatanga. mutsva [More ...]
Vashandi veMetro vakanunura imbwa, iyo yakavharirwa ruoko pakasango pane Kadıköy metro station. Muridzi wembwa, Fatma Kamuran Koç, akashanyira varindi vechiteshi nembwa yake. Kadıköy - Tavsantepe Metro Line kuKadikoy chiteshi [More ...]
Dare reConstitutional Court (AYM) rakaburitsa nechisimba chikumbiro chekumisa mukuru, richikurudzira zvikumbiro zveCumhuriyet Halk Party (CHP) sachigaro weboka, Ergin Altay, Özgür Özel naEngin Özkoç uye nemutevedzeri we139 weKanal Istanbul. [More ...]
TCDD yechi5 Dunhu redunhu inoenderera mberi nekudyara kwayo munharaunda dzebasa. Izvo zvakataurwa neDunhu reDunhu kuti mamirioni mazana masere nemakumi matanhatu nemakumi matanhatu eTL yakaiswa muzvirongwa makumi maviri nezvishanu muna 2019. 21 Projekti muMalatya [More ...]
Kana iwe uchida kukura yako ma media media account asi vateveri vako vasingawedzera, https://takipciodasi.com/ Iwe unogona kuzivisa yako Instagram account kuhukuru hwakawanda nekushanyira webhusaiti, nekushandisa mukana wemazuva ose mabhonasi uye maawa akawedzerwa mabasa. mazuvano, [More ...]
İzmir Metropolitan Municipality yakaisa Selvili Underground Parking Lot yekushanda muKarabağlar. Izmir Metropolitan Municipality Meya Tunç Soyer akavhura Selvili Underground Parking Roti. Vachitaurawo pamhemberero iyi, Tunç Soyer akati kudzika kwemota yekupaka kuchaenderera. Kuuya kuhofisi [More ...]